Wiil La Dhashay Messi Oo Lagu Xiray Dalka Argentina Xili Sababta Ka Dambeysa La Ogaaday %
Wiil la dashay Lionel Messi, kaasoo lagu magacaabo Matias Messi, ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu xiray gudaha dalka Argentina, kadib markii lagu helay dambi kale, kaasoo mar hore lagu soo eedeeyay.
Sababta loo Matias Messi, ayaa waxaa lagu sheegay inuu ku lug-yeeshay shil kaasoo uu kula galay Wabiga Parana River, koox Kaluumeysta ah, waxaana la xiray bishii November ka hor inta aan Damiin lagu sii deynin.
Bishii November, ee lasoo dhaafay ayaa waxyaabaha lagu soo deeyay Matias Messi, waxaa kamid ah inuu qataay Qori aan sharci yeys-neen, taasoo keentay in Xabsi loo tixaabo, inkastoo dib xuriyadiisa loo siiyay.
Sida laga soo xigtay Website Olé and Telam mar kale, ayaa Matias Messi, kaasoo ku lug-yeeshay shir baabuur oo ka dhacay Magaalada Buenos Aires la xiray, iyadoona shirkaas uu helis geliyay qof kale.
Waxaa lagu soo waramayaa inuu watay mar kale, Matias Messi qoryo, taasoo soo dedejisay in Booliska ay si deg deg ah, Xabsiga udhigaan wiilkaan.
Sida ay sheegeen dad goobjoog ahaa, Booliska ayaa gacmaha ka jeebeeyay Matias Messi, waxaana laga yaabee in si deg deg ah maxkamada loosoo taago.
Laakiin, Booliska ma aysan wali ka hadal Kiiskaan, waxaana la sheegayaa in wali aysan helin wax cadeymo ah oo muujinaya inuu watay Matias Messi, qoryo marka laga soo tago, goobjoogayaal sidaas ku waramay.
ArgentinaLionel MessiMatias Messi